ICofttek Scholarship - Izithasiselo zeCofttek.
Wonke umuntu ufuna umsebenzi omuhle kakhulu nemfundo ezowasiza ukuba ahambe kude. Kodwa-ke, abantu abaningi kufanele bancame umsebenzi wabo nezinjongo zokufundisa unyaka nonyaka. ICofttek iyazi ukuthi ibaluleke kangakanani imfundo efanele, yingakho sisiza ukufundisa abafundi bethu ngokudla izithasiselo ngokubuyekezwa nezincomo zethu.
I-Cofttek Scholarship yethu iphromoshini entsha esiziqhenya ngayo ukuyimemezela. Yimali eyi- $ 2000 yeminyaka eyenzelwe ukusiza abafundi ukufeza amaphupho abo emfundo nawomsebenzi. Le mfundaze izonikezwa umfundi oyedwa ngonyaka ukusiza ukukhokhela izindleko zemfundo. Silindele ukuphinda kabili inani lemfundaze ngonyaka olandelayo.
Le mfundaze izonikeza umfundi ngayo $ 2000 ukukhokhela izindleko zemfundo. Kuyisifundiso kuphela - futhi asivuselelwa nhlobo. Izothunyelwa ehhovisi lezimali.
Sifuna umfundi ongayisebenzisa ngempela imali esiyinikelayo. Abafundi abathole iziqu nabangaphansi kweziqu zabo bangafaka izicelo, inqobo nje uma bebhaliswa ngokugcwele esikoleni sokuthweswa iziqu noma ekolishi eliqinisekisiwe. Ubuncane be-GPA (Isilinganiso seBanga lePhoyinti) ukufaka isicelo somfundaze yi-3.0
Ungasifaka Kanjani isicelo
Ungasifaka isicelo semfundaze kalula. Kuklanyelwe ukuthi kube lula ukufanelekela nokufaka isicelo. Inani elilinganiselwe labafundi elizokwazi ukufaka isicelo, futhi munye kuphela umfundi ozokwazi ukunqoba.
Nakhu ukuthi ufaka kanjani isicelo:
Qala ngokubhala indatshana yamagama angama-500 noma ngaphezulu mayelana nokuthi “Ukungezelela kokudla kusetshenziswa ngokuthandwa kakhulu kunangaphambili”. Ungabuyekeza enye yezifundo oziqedile bese usebenzisa lokho ukuthola imininingwane ukuthi kuzokusiza kanjani ukuthuthukisa ikhono lakho. Indatshana izodinga ukulethwa yiyo Disemba 31st, 2020.
Uzodinga ukuthumela uhlelo lwakho [i-imeyili ivikelwe] qiniseka ukuthi ikwifomethi ye-Microsoft Word. Sebenzisa ikheli lakho le-imeyili lezemfundo (edu) kuphela. Uma ufaka uhlelo ku-PDF noma ku-Google Doc, ngeke yamukelwe.
Ifomu lokuhambisa kufanele lifake imininingwane elandelayo: igama lakho, inombolo yocingo, igama leyunivesithi kanye nekheli lakho le-imeyili.
I-eseyi kufanele ibhalwe ngamagama akho futhi kufanele ibe yinzuzo kumfundi.
Noma imuphi umbono ozoholela ekuthini ukuhanjiswa kwakho kuqale ukwenqatshwa ngokushesha.
Nikeza kuphela ulwazi oluchazwe ngenhla.
Indatshana yakho izokwahlulelwa kubuqambi bayo, ukucatshangelwa kanye nenani.
Ukulethwa ngakunye kubuyekezwa ngesandla futhi ngoJanuwari 15, 2021, ophumelele uzomenyezelwa futhi aziswe nge-imeyili.
Siyaqiniseka ukuthi alukho ulwazi lomuntu siqu lwabafundi olwabiwe, futhi lonke ulwazi lomuntu siqu lugcinelwa ukusetshenziswa kwangaphakathi kuphela. Asinikezi imininingwane yabafundi kwabanye abantu nganoma yisiphi isizathu, kodwa sinelungelo lokusebenzisa izihloko ezithunyelwe kithi nganoma iyiphi indlela esifisa ngayo. Uma uhambisa i-athikili ku-Cofttek, usinika wonke amalungelo okuqukethwe, kufaka phakathi ubunikazi bokuqukethwe okushiwo. Lokhu kuyiqiniso noma ngabe ukuhanjiswa kwakho kwamukelwa njengophumelele noma cha. ICofttek.com inelungelo lokusebenzisa wonke umsebenzi owethulwe ukushicilelwa njengoba ibona kufanele nalapho ibonwa kufanele khona.